Maalinta: Abriil 25, 2018
Eurasia Airshow waxay bilowday
Antalya waxay mar kale martigelinaysaa urur aad u muhiim ah. Eurasia Airshow, oo isu keento sumcadaha iyo maareeyayaasha waaxda duulista, ayaa bilaabmay. Menderes Türel, Duqa Magaalada Caasimadda [More ...]
Köseköy Junction ayaa bixin doona gaadiid aan kala go 'lahayn
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa hirgalinta mashruucyada Wadada D-100 weyna ku dhexjirayso Qorshaha Masterka Gaadiidka. Iyada oo la adeegsanayo Mashruuca Is-gooyska Köseköy, Dowladda Hoose ee Magaalada waxay abaabushay wadooyinka dhinaceeda si ay u sameeyaan taraafikada D-100 [More ...]
DTD 7. Golaha Guud ee caadiga ah ayaa la qabtay
Ururka Gaadiidka Waddooyinka (DTD) 7. Golaha Guud ee caadiga ah 14 waxaa lagu qabtay bishii Abriil hudheelka Larespark ee Taksim. Kadib doorashadii Madaxtinimada Golaha, waxaa warbixin laga siiyay Warbixinta Sannadlaha ah iyo Warbixinta Guddiga kormeerka. DTD Golaha Guud [More ...]
Ankara Metropolitan degmada ego by Agaasinka Guud ee gaadiidka hore iyo dadweynaha oo kaliya Turkey ee u adeegta sida line baabuur cable Şentepe in dayactirka iyo hawlaha dayactirida Yenimahalle-degdegga ah waxaa lagu sameeyaa. Waqtiga hawlgalka ee xariga [More ...]
Izmitm taraafikada mooshinka, gaariga rakaabka ah ayaa ku hor dhacay. Qofna sankiisa kama dhiig baxo markii taraamka iyo gaariga ay ku dhaawacmeen shilka. [More ...]
Mashruuca dhagaxa dhagaxa ah ee loogu talagalay TCDD oo ku yaala Çaltı Under Menemen ayaa la joojiyay
Mashruuca qodista ee TCDD, oo loo qorsheeyay in laga dhiso meel u dhow Gediz Delta ee degmada Menemen ee Izmir, ayaa la joojiyay. Menemen'de Gediz Delta oo ku dhow Isuduwaha Izmir ee 'EIA ma ahan mid lama huraan ah' in la furi doono dhagax ay leedahay 'TCDD'ye' [More ...]
In kasta oo laamiyada tareenka ee ka soconaya Halkapınar illaa Fahrettin Altay la dhisay, haddana dadweynaha ayaa ka mahadceliyay. Gawaarida 1, oo aan wali dhammeysan bishii koowaad, waxay noqon doontaa lacag la’aan ilaa Julaay. Kireynta halka taraamku dhaafo [More ...]
Nidaamka Iibsiga Tigidhada EYBİS: Wadooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u hesho nidaamka tikidhada rakaabka ee EYBİS ee tikidhada xawaaraha sare iyo tareenka waaweyn. Xagee laga iibsadaa EYBİS? TCDD [More ...]
'20. Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktaş wuxuu kaqaybqaatey sidii af hayeenka aqoon isweydaarsiga loo qabtay baaxadda Maalmaha Maaliyadda. Duqa magaalada Alinur Aktaş ayaa la kulmay ardayda wax ka barata Jaamacadda Uludağ [More ...]
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş wuxuu la kulmay ardayda kuliyadaha injineerinka ee jaamacada Uludağ. Duqa Magaalada Alinur Aktaş, Jaamacadda Uludağ (UU) Ardayda bulshada ee Electromobile waxay soo saareen 'boqolkiba boqol oo baabuur ku shaqeeya koronto' [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay samayn doontaa biriijooyin iyo jidad isku xidha inta udhaxeysa Çayırova iyo Tuzla Şifa Neighborhood. Marka loo eego mashruuca, buundada cusub ee isgoysyada iyo wadooyinka isku xira xaafadaha waaweyn ee xaafadaha galbeedka Sifa iyo Cayirova [More ...]
Noocyada Joogtada ah ee 2018 Istanbul buluş Joogtanaanta Joogtada ah ee 18 Istanbul tarafından waxaa lagu qabtay Fairmont Quasar Istanbul bishii Abril 19 Machadka Sustainability, oo ay taageerayso UTİKAD. Waxaa loo abaabulay markii ugu horreysay baaxadda dhacdada [More ...]
Xilligii Soomaliya ee Trabzon oo la furay
Dawlada Hoose ee Magaalada Trabzon ayaa furtay xilli roobaadka. Si loo xalliyo dhibaatooyinka ka jira waddooyinka xaafadaha, Dawladda Hoose ee Magaalada waxay muhiimad gaar ah siineysay shaqooyinka rafiiqa waxayna u furtay xilli-xilliyeedka ashtakooyinka 2018. Maalin kasta [More ...]
2. Congresska Qaranka ee Gaadiidka iyo Saadka si loo sii wado ULUK 2018
Kongareeska Gaadiidka iyo Saadka, oo ah taxanaha nashaadaadka cilmiga ah ee ay bilaabeen Kuliyadaha Gaadiidka iyo Saadka ee Jaamacada Istanbul iyo Ururka Saadka, ayaa waxaa qaban qaabiya shirarka, goleyaasha, aqoon isweydaarsiyada, aqoon isweydaarsiga iyo wixii la mid ah. dhacdooyinka dalkeenna la leh maxalli [More ...]